बालुवाटारमा तयार भयो मन्त्रिहरुको लिस्ट, खोसिँदै छ यी मन्त्रीको पद ! – Koshidaily
बालुवाटारमा तयार भयो मन्त्रिहरुको लिस्ट, खोसिँदै छ यी मन्त्रीको पद !
access_alarms Koshi daily २९ भाद्र २०७७, सोमबार ०७:३५	chat_bubble_outline 0	Comments
काठमाडौं | नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य सुरु भएको छ । त्यसैले दुई वर्षे मापदण्ड बनाएर हेरफेर गर्ने बिषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भैरहेको छ । स्रोतका अनुसार नेकपा पार्टीभित्र विवाद चर्किएका बेला महासचिव विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलका सदस्यहरू मन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै भएको छ । कार्यदलमा भीम रावल, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे र पम्फा भुसाल सदस्य थिए । जसमध्ये शंकर पोखरेल प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री भएकाले उनी मन्त्री बन्ने छैनन् ।
स्थायी कमिटी सदस्यलाई मन्त्री बनाउँदा सरकारको छविमा सुधार आउने प्रधानमन्त्री ओलीको अपेक्षा छ । त्यसैले कार्यदलका केही सदस्य मन्त्री बन्ने लाइनमा छन् । हाल अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय खाली रहेका छन् । तीनवटा मन्त्रालय खाली नै रहेका, दुईवर्ष पुगेका मन्त्री हटाउँदा थप मन्त्रालय खाली हुने र केही मन्त्रालय टुक्र्याएर मन्त्रिपरिषद्लाई प्रभावशाली बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना रहेको स्रोतले जनाएको छ । आलोचनालाई चिर्दै सरकारलाई जनस्तरमा लोकप्रिय बनाउने भावअनुसार नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषय स्थायी कमिटी बैठकमा उठेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि दुई वर्ष पूरा गरेका र प्रभावकारी काम देखाउन नसकेका मन्त्रीहरूलाई बिदा गर्ने पहिलो सूत्र हुनसक्ने बुझिएको छ । मन्त्री बनाउने विषयमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड तथा महासचिव विष्णु पौडेलले गृहकार्य थालेको स्रोतले बतायो । केही मन्त्रीहरुको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गर्ने तयारी छ । सचिवालय सदस्यमध्ये ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा बादल मन्त्री छन् । दुवैलाई मन्त्री पदमा कायमै राखिए पनि जिम्मेवारी भने हेरफेर हुन सक्ने बताइएको छ ।